သူကြီးမင်း (တုံးဖလား): ထိုငြမ်း ဆင့်တုံ့ မဆင့်တုံ့
ကျိတ်ပိုး ပိုးပန်း၊ ရှက်သွေးဖြန်းသည်
ထိုပန်း ပွင့်တုံ့ မပွင့်တုံ့။
ထိုလမ်း ဖွင့်တုံ့ မဖွင့်တုံ့။
သွေးသား ရွှင်လန်း၊ ပျို လက်ကမ်းသည်
ထိုစမ်း ခွင့်တုံ့ မခွင့်တုံ့။
ထိုကမ်း ချင့်တုံ့ မချင့်တုံ့။
ထိုငြမ်း ဆင့်တုံ့ မဆင့်တုံ့။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 00:05
သည်အပုဒ်လေးက ကြွရွရွလေး ချစ်စရာ
Friday, 1 March 2013 at 04:48:00 GMT
Friday, 1 March 2013 at 08:47:00 GMT
“ပန်းမာလ်တွတ်တိုး၊ တိတ်တခိုးဖြင့်” နေရာမှာ ကာရန်ယူထားတာထင်ပါတယ်။
ကဗျာတစ်ပိုဒ်စီရဲ့ အချလေးတွေ သဘောကျတယ်။
“ထိုငြမ်း ဆင့်တုံ့ မဆင့်တုံ့။” ကိုတော့ ပြုံးသွားတယ်။
Friday, 1 March 2013 at 10:01:00 GMT
Friday, 1 March 2013 at 11:43:00 GMT
very lovely poem...cheers:)))
Friday, 1 March 2013 at 13:46:00 GMT
အဲ့ဒါ ဘာနဲ့ပြန်အလျော်ပေးဖို့ စဉ်းစားထားလဲ :P
အသစ်တွေ့ရင်လဲ မလာပဲ မနေနိုင်ဘူးးးးးးးးးးး
ဟင့်အင်း ဘာမှကျန်တော့ဘူးးးးးးး ဒါဗြဲ :)
Friday, 1 March 2013 at 14:07:00 GMT
ကဗျာလေးက ချစ်စရာလေး..ပန်းမာလ်တွတ်တိုး၊ တိတ်တခိုးဖြင့်..မာလ်လို့သုံးထားတာ ထူးခြားတယ်..ကိုညိမ်းနိုင် အမေးကို လင်းပါးဦး တဂျီးမင်း...း)
Friday, 1 March 2013 at 14:26:00 GMT
မိုးနတ်က ရိုးရိုးသရုပ်ဆောင်ကနေ အငြိမ့်မင်းသမီး ဖြစ်သွားလေသလား မသိ ဟိ ဟိ ဟိ။ (မှတ်ချက် ဟိ ဟိ သည် ကာရန်ကိုက်အောင် ယူထားခြင်းမျှသာ ဖြစ်သည်)
(ဘာကဗျာလည်း မသိ ဟိ၊ မှတ်ချက် ရှင့်သည် Miss Juice ကဗျာမှ ယူသုံးသည်)
Friday, 1 March 2013 at 16:29:00 GMT
လူပြိုကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ ဘလော့အလည် ကျဲသွားပြီပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အနုအရွတော့ ခံစားတတ်သေးသား။း)
ငြမ်းဆင့်ပြီးရင်တော့ ကမ်းလင့်ရုံဘဲပေါ့။ လွမ်းချင့်စရာကြီးနော်။ ဒါပေမဲ့ သူကြီးမင်းက ဘုရားပြီးလဲ ငြမ်းမဖျက်တတ်ဘူး ဆိုတဲ့ အကြောင်း။း)
"ထိုငြမ်းဆင့်တုံ့ မဆင့်တုံ့" ကို ပြုံးသွားတယ်ဆိုတော့ ဘယ်လို ဘာသာပြန်သွားလဲ မသိ။း)
ကြောင်စမင်းကလဲ မြန်မာစာနဲ့ ရေးတော့ မြန်မာ ကဗျာပေါ့။ မဟုတ်လား။း)
ကြောင်စမင်းရေးတာလဲ မြန်မာကဗျာဘဲလေ။ ဖတ်လို့ ကောင်းမှကောင်း။
ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ လာ အားပေးတာ။
အသဲယားသွားရင် ပင့်ကူအရှင်တစ်ကောင် မျိုချလိုက်။ ဗိုက်ထဲရောက်ရင် အယားပြေအောင် ကုတ်ပေးလိမ့်မယ်။ သူကြီးမင်းက အဲဒါဘဲ ကူညီနိုင်တာ။း)
သူ့ကွန်မင့်ဖတ်ရတာလဲ အပြေးသမားတွေ အပြေးပြိုင်ပွဲမှာ သေနတ်မဖောက်ခင် ပြေးရတော့မလို မပြေးဘဲ နေရတော့မလိုလို ခံစားမှုမျိုး။း)
ပန်းမာလ်လုိ့ သုံးထားတာက မာလာဆိုတဲ့ ပါဠိပုဒ်က လာတာမို့လေ။ (မာလာ=မာလ်= ပန်း)။ ပန်းမာန်လို့ရေးရင် (မာန=မာန်)လို့ ဖြစ်နေမှာမို့။
ကညိန်းအမေးကို ဖြေထားပြီးကြောင်း။း)
ဒီတစ်ခါ မှတ်ချက်တွေ အတော်များတယ်။ ကာရန်ကိုက်အောင် " ဖြစ်သွားလေသလားမသိ ဟိ ဟိ ဟိ" လို့ ရေးရင် "လွန်နှစ်သက်၏ရှင့် ဟင့် ဟင့် ဟင့်" လို့လဲ လုပ်ဦးမှပေါ့။း)
ဘုန်းနှစ်တောက်လဲ ကဗျာလေးတွေ ဖြစ်တယ်နော်။ စမ်းကြည့်ပါလား။ လေး သုံး နှစ် (သို့မဟုတ်) လေး သုံး တစ်။ ရေးကြည့်ရင်းနဲ့ လွယ်ကူလာလိမ့်မယ်။
အဟိ ရယ်မော တသောသော။
(လေး သုံး နှစ်)
(လေး သုံး တစ်)
စသဖြင့် စသဖြင့်ပေါ့ ဘုရား။ အဲဒီ အစဉ်အတိုင်းသာ ကြိုက်သလောက် လှိမ့်ပေတော့။ သံစဉ်ကိုက်သွားလိမ့်မပေါ့ ဘုရား။
ဟာ ဟ။ ပညာရှင်ကို ဆရာလုပ်မိသွားပြီလား မသိ။း)
Friday, 1 March 2013 at 20:16:00 GMT
ပိစိကို အားကျလို့ ကဗျာလေး မ-သွားဘီ
ကျေးကျေးပါ သူကြီးမင်းရယ်...နော်။ ဟုတ်လား
Saturday,2March 2013 at 12:19:00 GMT
ထိုစန်းမြင့်တုံ မမြင့်တုံ...။ ။
( ဟဲ ဟဲ ... အဖြည့်ခံရတု မဟုတ်သော်ငြားလည်း တစ်ပိုဒ်ထပ်ဖြည့်ပေးလိုက်တယ်...အချီပိုဒ်တွေ နဘေယူမထားတော့ သံပေါက်စပ်နည်းပဲ သုံးထားတယ်ထင်ပါရဲ့...ဟုတ်စ...ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် လူပြိုကြီး အပြိုကြီးတွေ ရေးသမျှကဗျာတွေကတော့ အဖြည့်ခံရတုချည်းမှတ်ရမှာပဲ...)
ကိုဘကြိုင်တို့ ကိုညီလင်းသစ်တို့တော့ ကျွတ်ကုန်ပြီနော သူကြီးမင်း...ဒီတစ်ခါ မကျွတ်သေးတာ ခါးပတ်ခိုင်ခိုင် ပတ်ထားလို့ထင်ရဲ့...ဟုတ်စး)
Saturday,2March 2013 at 12:51:00 GMT
တစ်ချိန်ချိန်မှာ ကမ္ဘာမကျော်ဘူးလို့ ဘယ်သူပြောနိုင်မလဲ။
ကဗျာဆရာနဲ့အတူ ကွန်မန့်တွေကလည်း ဖတ်လို့ကောင်းမှကောင်းး) စကားမစပ် ပြောခဲ့ပါရစေ။
ကျွတ်ကုန်တာ မောင်ဘကြိုင်နဲ့ မောင်ညီရဲသစ်ပါ ဦးဟန်ကြည်ရဲ့ မောင်ညီလင်းသစ်က စွန်တာကြာပေါ့း)တဂျီးမင်းလည်း ခါးပတ်လျှော့တော့
Saturday,2March 2013 at 13:58:00 GMT
နွေ မိုး ဆောင်း ရာသီအလိုက် ကဗျာလေး အားပေးသွားပါတယ် ... ( ဘုန်းတောက်အတွက် ကဗျာဖတ်ပြီး အတော်ရီလိုက်ရတယ် )
Sunday,3March 2013 at 03:06:00 GMT
Sunday,3March 2013 at 12:02:00 GMT
ကဗျာအဖွဲ့လှပစွာဖွဲ့တတ်တဲ့ သူကြီးမင်းကို ဂုဏ်ယူမိပါရဲ့.
Sunday,3March 2013 at 14:22:00 GMT
သည်ကဗျာကို တင် တင်ခြင်းဖတ်သွားတာပေါ့ဗျာ
သို့ပေသိ ကွန်မင့်ရေးဖို့ မပြောနဲ့ ကဗျာကို နောက်တစ်ခေါက်ဖတ်ချင်တာတောင် တစ်ခေါက်တည်း ဖတ်ယုံနဲ့ အားရမှာမဟုတ်တဲ့ အတွက်ကို စာရွက်ထဲမှာကူးယူသွားပြီး တစိမ့်စိမ့်ဖတ်နေလိုက် အဲလောက်ကို ကောင်းတဲ့ ကဗျာ။
ကြွကြွရွရွလေးနဲ့ နုအိနေလိုက်တာများ သိပ်ကောင်းတယ်
ငတ်ငတ်ပျက်ပျက်နဲ့ ထမင်းကို ဟင်းကောင်းကောင်းနဲ့ စားလိုက်ရသလိုမျိုး ''ရသ''တွေက ရင်တွင်းကို ရစ်ဆင်းသွားတာ။
ကွန်ပျူတာ ပျက်နေလို့ သူတပါးစက်နဲ့ ငှားသုံးနေတုန်း သူကြီးမင်း ကဗျာက ဗြုန်းဆိုတတ်လာတော့ ထပ်ခါထပ်ခါ ဖတ်ချင်နေသောစိတ်ကို မျိုသိပ်မရအတူတူ စာရွက်ထဲမှာ ကူးယူပြီး ဖတ်မိပါကြောင်းဗျာ။
Monday,4March 2013 at 12:55:00 GMT
ကဗျာလေးကို.. မ သွားတယ်ဆိုတော့.. မ ရုံဘဲ မ သွားပါဘုရား။ လွှတ်တော့ မချလိုက်ပါနဲ့။း)
ဆရာဟန်တို့ကတော့ ကဗျာလေးတွေလုပ်လဲ အဆင်ပြေတာပါဘဲ။ ကဗျာနုနုလေးတွေ ညှစ်ထုတ်ပါဦး။ လူပြိုကြီးတွေရဲ့ အနုအလှ သမုဒယလေးတွေကို ခံစားကြည့်ချင်လို့။ ဟုတ်ပါ့။ ဆရာဟန်ပြောသလို လူပျိုကြီးတွေ အပျိုကြီးတွေ ရေးသမျှကဗျာတွေကတော့ ဘာကဗျာဖြစ်ဖြစ် အဖြည့်ခံရတုတွေချည်းဘဲပေါ့။
သူကြီးမင်းကတော့ ခါးပတ်ကောင်းကောင်း ပတ်ထားတယ်ဗျို့။ တော်ရုံတန်ရုံနဲ့တော့ ကျွတ်ကျမဲ့ပုံ မပေါ်တော့ဘူး။း)
ဟုတ်တယ်နော်။ သူကြီးမင်းရဲ့ လက်ရာပန်းချီလေးတွေ စုဆောင်းထားမှ။ အနောက်တိုင်းမှာ ဘာမှန်းမသိတဲ့ ပန်းချီကားတွေ သန်းချီပြီး ဈေးကြီးနေကြတာ။း)
တီတင့်ရေ... သူကြီးမင်းကတော့ ဒီဘ၀ဒီမျှနဲ့ဘဲ ရှိပါစေတော့။ မောင်ဘကြိုင်တို့လို သတ္တိမရှိဘူး။း)
အမြဲတမ်းလာရောက်အားပေးတဲ့အတွက် အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တကယ်ပါ။
တီလေးခင်ရေ..တီလေးတို့လာဖတ်ကြတော့ သူကြီးမင်း အရမ်းကို အားတက်မိပါတယ်။ အဲဒီလို တွန်းပေးတဲ့သူရှိရင် အတော်လေး လှိမ့်ချင်နေတာလေ။း)
ညီမရေ...သူကြီးမင်းက လှပစွာ မဖွဲ့တတ်ပါဘူး။ ကဗျာတွေကို ရမ်းတုတ်ပြီး ရေးထားတာလေ။း)
မောင်မင်းဧရာ.. တင်စားချက်တွေ အတော်လေးများနေပြီးနော်။ သူ့တင်စားချက်ကမှ ပို အရသာရှိသေး။ ငတ်ငတ်ပြတ်ပြတ်နဲ့ ထမင်းဟင်း ကောင်းကောင်း စားရသလိုမျိုးတဲ့။ ကဗျာဆရာပီသပါပေတယ်။
အင်း... ကပ္ပိယကြီးကိုရင်လဲ ကွန်ပျူတာပျက်၊ မောင်မင်းဧရာလဲ ကွန်ပျူတာပျက်ဆိုတော့ မလေးကလူတွေ အတော်လေး ကွန်ပျူတာကို မစာမနာသုံးကြပုံပေါ်တယ်။ ဒီလို ကြမ်းတမ်းလို့ မောင်မင်းဧရာ တကိုယ်တည်းဖြစ်နေတာ ဖြစ်မယ်။ ဘာမှတော့ မဆိုင်။း)
Tuesday,5March 2013 at 11:20:00 GMT
ဒီကဗျာလေး အရမ်းကြိုက်တယ် :D
Tuesday,5March 2013 at 13:46:00 GMT
မြန်မာဆန်သော ကာရန်မိသော ၃ရာသီကဗျာလေး..
Wednesday,6March 2013 at 10:25:00 GMT
Wednesday,6March 2013 at 19:45:00 GMT
သူဂျီမင်းကို အားကျထှာ ။
Friday, 8 March 2013 at 05:11:00 GMT
I have loaded your site in4totally different web browsers and I must say your blog loadsalot quicker then most.
My personal email is: wesleycruz@gmail.com. I'll even sign up through your own affiliate link if you would like. Thank you
Here is my blog - dubstep